FAYL XAQIIQO AH: Fashionomics: Isticmaalka awoodda dhaqanka iyo dharka Afrika
2021 wuxuu ahaa sanad xasuus mudan u leh xuquuqda haweenka ee aduunka.
Laga soo bilaabo haweenka safka hore kaga jira dagaalka cudurka COVID-19, ilaa sharciyo cusub oo lagu taageerayo kuwa ka badbaaday xadgudubyada ku saleysan jinsiga, 2021 waxaa la arkey horumar la taaban karo, oo wax ku ool ah si loo helo bulsho loo siman yahay.
Tokyo waxay martigelisay ciyaarihii Olombikada ee jinsi ahaan ugu dheelitiran taariikhda, iyadoo ku dhawaad 49% ciyaartooyda ka qaybgalay ay ahaayeen dumar. Xittaa shirkadda alaabta lagu ciyaaro ee Lego ayaa ku dhawaaqday dhamaadka eexda jinsiga ee guud ahaan alaabtooda ciyaarta ugu caansan ee dunida.
Dumar ka badan ayaa sidoo kale xilalka la wareegay xafiisyada siyaasadda ee ugu sarreeya, oo ay ku jiraan dalalka Bakistaan, Boland iyo Filibiin. Bishii Maarso Samia Suluhu Hassan waxay noqotay haweenka ugu horreysay ee Tanzania Madaxweyne ka noqotay. Bisha Juunyo Robinah Nabbanja ayaa loo magacaabay doorka Ra'iisul Wasaaraha Uganda. Bisha Seteembar Najla Bouden Ramadhane ayaa loo magacaabay Ra'iisul Wasaaraha Tunisiya, taasoo ka dhigaysa haweenka ugu horreysay oo hogaamisa waddan ku yaalla gobolka Carabta.
Bisha Maarso waxaa xittaa Ngozi Okonjo-Iweala lagu magacaabay Agaasimaha Guud ee Ururka Ganacsiga Adduunka, taas oo ka dhigaysa labadaba haweenka ugu horreeyay iyo Afrikaanka ugu horreeyay ee jagadan qabatay 26ka sano ee taariikhda ururkan.
Okonjo-Iweala kuma cusba gaaridda jagoyin sare, iyadoo ahayd haweenka ugu horreysay ee noqota Wasiirka Maaliyadda Nayjeeriya iyo Wasiirka Arrimaha Dibadda.
Maadaama ay soo dhowaatay maalinta caalamiga ah ee haweenka 2022, indha-indheeyeyaal badan oo Afrikaan ah ayaa eegaya halka arrimaha jinsiga iyo xuquuqda haweenku uu ka xoogsamaayo iyo saamayn ku yeelanaayo meel u dhow guriga.
Moodo ahaan aad u fiican
Deegaannada tafaariiqeed ee Afrika waa qaar ka mid ah kuwa ugu adag adduunka, marka la eego in 95% ee suuqa wuxuu weli ka kooban yahay goobo ganacsi oo dhaqameed.
Ka dib markii ay dhiirigeliyeen kartida iyo adkaysiga ay ku arkeen guud ahaan qaaradda, Bangiga Horumarinta Afrika (AfDB) wuxuu abuuray madalka Fashionomics Africa "iyadoo ujeedadu tahay in la dhiso Afrika barwaaqo ah oo ku salaysan kobac loo wada dhan yahay iyo horumar waara ah".
Hadafka madalka Fashionomics-ka waa in haweenka Afrikaanka ah iyo naqshadeeyayaasha dhalinyarada awood u yeeshaan inay abuuraan iyo koriyaan ganacsigooda. Ujeeddooyinka waxaa ka mid ah helitaanka suuqyada iyo maaliyadda oo kordhay, oo ay weheliso hagitaan ka yimid la taliyeyaal khibrad leh iyo fursadaha isku xirka.
Fashionomics sidoo kale waxay siisaa baaxad wayn ganacsiyada ay haweenku hogaaminayaan si ay uga qaybqaataan is-dhexgalka gobolka iyo kan caalamiga ah, soo jiidashada maalgashiga iyo maalgelinta mashaariicda dardargelinta.
Xirfadaha Afrikaanka. Baahida caalamiga ah.
Warshadaha moodada adduunka oo dhan ayaa la filayaa inay labanlaabmaan 10ka sano ee soo socda, iyagoo soo saari doonaa ilaa US$5 tirilyan sanadkii. Tani waxay Afrika u soo bandhigaysaa fursad qaali ah: laga bilaabo alaabta aan weli laga shaqayn iyo naqshadaynta ilaa wax soo saarka iyo suuq-gaynta.
Moodada ayaa sidoo kale ganacsi weyn ka ah Afrika: isku darka suuqa dharka iyo kabaha ee Afrikada dhexe iyo koonfuureed ayaa lagu qiyaasay inuu yahay US$ 31 bilyan, sida lagu sheegay xogta Euromonitor International.
In la bar tilmaameedsado warshadaha moodada waxay la macno tahay in la beegsado warshadaha oo dhan, min beeralayda yar yar ilaa naqshadeeyayaasha moodada. Tallaabo kasta ee 'wax soo saarka' moodada, qiimo badan ayaa lagu daraa, waxaana la abuurayaa shaqooyin dheeraad ah.
Soo Bandhig Moodo ee Wayn
Afrika waxay maraysaa kacaan dhaqameed, waxaana door muhiim aah ka ciyaaro jiil cusub oo ganacsatada moodada ah oo waxay soo bandhigaan iyo horumariyaan dhaqaalaha.
Dhiirigelinta ka imaanaysa caadooyinka dhaqameed ee Afrika ayaa sii socota, oo ay ku jiraan midabkeeda firfircoon iyo dharkooda midabka leh, sida suufka midabaysan ee dhukada leh, iyo tayada sare ee farshaxanimada dhaqamada Afrika.
Warshadaha moodada ayaa sidoo kale haysta awood la taaban karo si ay u dhiirigeliyaan oo ay is-beddel u keenaan qaar ka mid ah dadka aadka u liita, gaar ahaan haweenka iyo dhalinyarada, iyadoo isla markiiba horumarinayo is-beddelka qaab-dhismeedka.
Warshadaha iyo naqshadeeyayaasheeda, ee ku nool qaaradaha iyo dibaddaba, ayaa ka faa'iidaysanaya xaaladdan, iyadoo naqshado Afrikaan ah ay hadda si joogto ah ugu muujinayaan goobaha lagu bandhigo moodada ee New York, Paris, London iyo Milan. Bishii Oktoobar 2021, 20 naqshadeeyayaal ee moodada Afrika ayaa dhowaan dharkooda moodada cusub ku soo bandhigay Toddobaadka Moodada ee Portugal.
La-taliyaha qalabyada qaaliga ah ee fadhigiisu yahay Paris, Uche Pézard ayaa sheegay in dadka Nayjeeriya ay dib u dhisayaan caadooyinkooda horey si ay u sahamiyaan sheekooyinka dhaqameed iyaga oo adeegsanaya luqadda hodanka ah ee farsamada gacanta.
"Waxa dhacaya waa is-beddel weyn," ayuu yiri Pézard. "Ahaanshaha naqshadeeye Nayjeeriya maanta, waxaa loola jeedaa in moodada loo adeegsado sida madal lagu horumarinayo dhaqanka iyo hiddaha."
Pézard waxa uu tilmaamaya kartida ballaaran ee farshaxanimada ee dhaqaalaha Nayjeeriyaa taas oo tilmaan u ah sida qaabkan naqshadaynta kala furfurmi doono.
"Mar kasta oo naqshadeeyayaashu isticmaalaan dharkan, dad ka badan ayaa la tababaraayaa, kaasina faa'iidooyin dhaqaale ee badan ayuu keeni doonaa, wuxuuna kordhin doonaa mugga ganacsiga. Waxay noqon doontaa warshad gaar isku ah iyo waxay wax ku biirin doonta dhaqaalaha Nayjeeriya dal ahaan. "
Male-awaal + Maalgelin = Mustaqbal ifaya
Dhaqaalaha hal-abuurka caalamiga ah waxa uu soo saaraa $2.25 tirilyan, taas oo shaqaalaysa ku dhawaad 30 milyan oo qofood. Hase-yeeshee, Afrika waxay ku xisaabtantaa in ka yar boqolkiiba 3 ee dakhliga guud iyo boqolkiiba 8 ee shaqooyinka warshadaha hal-abuurka ah, taas oo awoodaysa korin macnoowi ah.
"Dhaqaalaha hal-abuurka waxaa hadda loo aqoonsaday inuu yahay qalab horumar waara ah," ayay tiri Marisa Henderson, oo ah madaxa Barnaamijka Dhaqaalaha Hal-abuurka ee UNCTAD. "Wadamada soo koraya qaarkood, tani waa dariiqa looga baxo cudurka caalamiga."
Qaar ka mid ah naqshadeeyayaasha ayaa waxaa kiciyay dhaq-dhaqaaqa isu-duwidda caalamiga ah, oo ay keeneen mudaaharaadyada, iyo wacyigelinta ay bilowday inay saarto farshaxanimada maxalliga ah.
"Waxaan diiradda saarnay sidii aan u hagaajin lahayn arrimaha aasaasiga ah iyo waxa aan sameyn karno si aan wax ka sii dhisno gudaha. Waa waqtigii aan korin lahayn dhammaan dhinacyada silsilada sahaydkeena,” ayuu yiri Adebayo Oke-Lawal, maamulaha hal-abuurka ee Dhaqanka Orange Nigeria.
Ayensu wuxuu rajaynayaa in mudaaharaadyadu ay u horseedaan is-beddel joogto ah, iyada oo shirkadaha moodada ay dib uga fikirayaan matalaadda shaqaalaha ee shirkadahooda.
"Waxaan arki doonaa saameynteeda shan, 10 sano ka dib oo waxaa jiri doono warshado moodo caalami ah oo aad u kala duwan oo soo jiidanaya shirkadaha moodada Afrika."
Hadafka waa in Afrika aysan noqon kaliya "Isha dhiirigelinta" oo ay noqoto "qalab xooggan oo is-beddel ah."